Mahad Salaad: “Xoogaga Wadaniyiinta oo garab hubeysan oo Bastoolado loo qebiyey” -News and information about Somalia
Home Warkii Mahad Salaad: “Xoogaga Wadaniyiinta oo garab hubeysan oo Bastoolado loo qebiyey”
Xildhibaan Mahad Salaad oo ka tirsan mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka ayaa sheegay in la hubeeyey kooxda la magac baxday Xoogaga Wadaniyiinta ee uu sameeyey Madaxweyne Maxamed C/laahi Farmaajo.
Mahad Salaad oo qoraal dheer soo dhigay bartiisa gaarka ah ee Facebook-ga ayaa tilmaamay in maalin dhoweyd degmo uu booqanayey guddoomiyaha gobolka Banaadir, Cumar Filish lagu qabtay 8 dhalinyaro ah oo hubeysan, markii la xirayna la sheegay inay ka tirsan yihiin Xooggaga Wadaniyiinta, kadibna la sii daayey, sida uu hadalka u dhigay.
Sidoo kale wuxuu carabka ku dhuftay in aan xilligan loo baahneyn maleeshiyaad, islamarkaana ay Soomaaliya leedahay ciidamo amni oo sifo sharci ah ku howl gala.
Soomaaliya uma baahna GUULWADEYAAL Madaxweyne Farmaajo leeyahay oo sidii Al-Shabaab dadka madaxa jabiya!
Xoogaga Wadaniyiinta Gobolka Banaadir ee Madaxweyne Farmaajo uu leeyahay gudaha dalka iyo dibedahaba waa lagu baahinayaa waxa ay leeyihiin garab hubaysan oo Bastoolado inta loo qaybiyay magaalada lagu sii dhex daayay!
Maalin dhawayd degmo ka mid ah degmooyinka Gobolka Banaadir oo Gudoomiyaha Gobolka booqasho ku tagay waxa la ii sheegay meeshii bulshada uu kula kulmayay in lagu qabtay 8 dhalinyaradaas ka mid ah oo Bastoolado ku hubaysan, markii ciidamada amnigu qabteen kadibna inta la soo wacay loo sheegay in ay ka tirsanyihiin Xoogaga Wadaniyiinta laguna amray in ay si degdeg ah u sii daayaan!. Haddaba waxaa in la isweydiiyo mudan in maleeshiyaad hubaysan magaalada lagu sii dhex daayo micnaha ay dowladnimada u leedahay yaa noo sheegi kara?
Madaxweynaha waxaan leenahay, Soomaaliya ciidamo amni oo sifo sharci ah ku howl gala, shuruucda dalka iyo xuquuqda shacabkana ilaaliya ayay u baahantahay ee GUULWADEYAAL Madaxweyne Farmaajo leeyahay oo sidii Al-Shabaab dadka madaxa jabiya uma baahna!
Previous articleXOG: DFS oo go’aan ka qaadatay in Jidadka loo xiro soo dhaweynta wasiiro Itoobiyaan ah
Next articleXOG: Siciid Dani & Senotor Faroole Ay Ka Dhex Qaraxday+Dagaal Cusub
Wasiir Cawad iyo Q.M oo ka wadahadlay Taageerada la siiyo Soomaaliya